Afar Baxaya, Afar Imanaya Iyo Man United Oo Wada Badalaya Gool Dhaliyaasha Ay Ku Haystaan Old Trafford. - Gool24.Net
Afar Baxaya, Afar Imanaya Iyo Man United Oo Wada Badalaya Gool Dhaliyaasha Ay Ku Haystaan Old Trafford.
Maamulka Man United ayaa go’aan ku gaadhay in ay Ole Gunnar Solskjaer taageeraan kadib musiibadii ay xili ciyaareedkan ku dhamaysteen.
Manchester United ayaa doonaysa in ay lacag badan galiyaan suuqa si ay Solskjaer u siiyaan fursad uu kooxda dib ugu soo dhisi karo.
Man United ayaa doonaysa in ay badasho afartii ciyaartoy ee xili ciyaareedkan weerarka uga soo ciyaarayay si ay u helaan afar badal u noqon kara.
Man United ayaa u muuqata kuwo ku qasban in ay go’aano adag qaataan si Ole Gunnar Solskjaer uu u heli karo fursad uu kooxda kaga soo saari karo dhibaatada wayn ee ay xili ciyaareedkan ku soo jirtay.
Wararka xanta suuqa ee maanta soo baxaya ayaa sheegaya in Man United ay meesha ka saarayso afartii gool dhaliye ee ay soo haysatay isla markaana ay lacag 215 milyan ah suuqa la gali doonto si ay badalkooda u helaan.
Romelu Lukaku, Alexis Sanchez iyo Anthony Martial oo dhamaantood xili ciyaareedkan ka hooseeyay heerkii laga doonayay iyo waliba Marcus Rashford ayaa hadda shaki la wada galiyay mustaqbalkooda Old Trafford.
Juventus iyo Inter Milan ayaa xiisaynaya saxiixa Alexis Sanchez iyada oo Man United wax walba u samaynaysa in ay meesha ka saarto xidiga reer Chile kaas oo si buuxda ugu fashilmay Man United.
Laakiin Romelu Lukaku oo isna eedayn badan la soo kulmayay ayaa hadda u muuqda in uu mustaqbalkiisa United shaki ku jiro iyada oo cag culayskiisu aanu la jaan qaadayn nooca kubbada ee uu Solskjaer doonayo.
Martial iyo Rashford ayaa ah kuwo ayna sahlanayn in ay maamulka Man United go’aan ka qaataan balse xaalada kooxdu ku jirto iyo baahida loo qabo in isbadal la sameeyo ayaa labadan xidig galaafan karta.
Man United ayaa doonaysa in ay weerarka kooxdeeda si buuxda u badasho iyada oo waliba ay wararku sheegayaan in ay Red Devils suuqa galinayso £215 milyan gini.
Weerarka oo kaliya ma aha, balse iyada oo Pual Pogba uu diyaar u yahay in uu baxo ayay maamulka Man United isbadal ku samayn doonaan khadka dhexe oo uu haddaba Ander Herrera ka baxay halka difaacu yahay mid awood loo samayn doono.
Si kastaba ha ahaatee, Ed Woodward ayaa la sheegayaa in xagaagani u yahay kii uu kooxda dib ugu soo celin lahaa ama uu isagu ku tagi lahaa waxaana la filayaa in suuqa ay United ugu jirto ciyaartoydii weerarka ee badali lahaa kuwa soo fashilmay.